Dhageyso: Sharciyada Cusub ee Sweden ka bilaabanaya Horaanta 2021 '' Lacagta Basaboorka oo la kordhiyay ''
HomeWararka Maanta SomaliskaDhageyso: Sharciyada Cusub ee Sweden ka bilaabanaya Horaanta 2021 ” Lacagta Basaboorka oo la kordhiyay ”
2 weeks ago Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
FotoHenrik Montgomery/TT / Somaliska.com
Sharciyo cusub ayaa sanadka Cusub ee 2021 bilowgiisa ka bilowday Sweden Waxaana sharciyada kamid ah Lacagta Basaboorka oo la kordhiyay 350 ilaa 400 kr oo hada ladhigay, Gawaarida oo la mamnuucayo hadii lagu yeesho deyn ka badan 5 kun oo Kronor oo ka dhalatay lacagta ganaaxa barking ama goobta qaladka ee gawaarida la dhigto.
Ardayda oo lacagta amaahda loo kordhiyay iyo Sharciyo kale oo Cusub.
Halkan ka Dhageyso iyadoo Maqal Ah
Ruqsad diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Wax ka beddelka sharciga waxaa ka mid ahaa shuruudo cusub oo loogu talagalay diiwaangelinta hawlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kordhinta macluumaadka ay tahay inay ku jiraan diiwaangelinta diyaaradaha.
sharciyada dhaqan galay tan iyo bilowgii sanadka ugu muhiimsan:
Kordhinta amaahda ardayda ee loogu talagalay dadka waaweyn ee horey u shaqeyn jiray lacag dheeraad ah oo ah 1000 karoon bishiib.
Yaraynta khidmadaha telefishinka 67 karoon qofkiiba sanadkii.
Lacagta Baasaboorka ayaa ka kordhay 350 karoon ilaa 400 kronor.
In taageero laga siiyo isticmaalka tamarta qorraxda.
Ka takhalusida farqiga u dhexeeya cashuurta ka dhaxaysa dadka hawlgabka ah iyo kuwa mushahar qaata.
Xeerar cusub oo lagu diiwaangelinayo hawlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
In la mamnuuco isticmaalka gawaarida iyadoo aan la bixin khidmadaha baarkinka oo aan ka badneyn 5,000 kronor.
Xeerar cusub oo ku saabsan sida loo xisaabiyo ganaaxyada rarka gawaarida.
Ciqaabta ka dhalata isticmaalka hubka oo kor loo qaaday iyadoo laga dhigay toddobo sano.
Xukun xabsi guri oo loogu xukumo dhalinyarada dambilayaasha iyada oo la adeegsanayo qalabka lagu xiro qof.
kordhinta heerarka magdhow ee sanduuqa shaqo la’aanta muddo labo sano ah.